Shabaab oo habeenkii maamula xaafado ka midA Baledweyne | Baydhabo Online
Saraakiil loo xir xirey qarixii Itoobiya...
Shabaab oo habeenkii maamula xaafado ka midA Baledweyne
Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa la sheegay in habeenkii xaafado ka mid ah Magaalada Baledweyne ay maamulaan, xilli xalay Magaaladaasi lagu dilay nin Nabadoon ahaa oo ka mid ahaa Ergadii Jowhar Xildhibaanada ku dooratay.
Taliye ku xigeenka Booliska Magaalada Baledweyne, Nuur Xasan Bidaar, ayaa sheegay dagaalyahanada Shabaab habeenkii inay soo galaan xaafadaha ku yaal galbeedka Magaalada Baledweyne.
Wuxuu sheegay xaafadahaasi inay ka fog yihiin ciidamada, islamarkaana Shabaab ay yimaadaan habeenkii iyaga oo ku soo gala si dhuumaaleysi ah.
“Ciidamada waa ay ka fog yihiin, Amisom, Millitariga waa ay ka fog yhiin Booliskana umaba soo dhawo, aagaas aad ayeey u xun tahay, maya laguma tilmaami karo Baledweyne, laakiin dhuumaaleysi ayeey habeenkii ku yimaadaan, aag dhan ayaa banaan, maalintii iska caadi waaye Baledweyne, laakiin habeenkii dhuumasho ayeey ku yimaadaan waan ognahay, waxaan jecelnahay xaafaddaasi in gacan bir ah lagu qabto.” Ayuu yiri Taliye ku xigeenka Booliska Baledweyne
Sarkaalkaan oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa sidoo kale sheegay inay diyaarinayaan qorshe lagu xaqiijinayo ammaanka xaafadda Hawlwadaag, oo inta badan ay ka dhacaan dilalka qorsheysan.
Ciidamada ammaanka Magaalada Baledweyne ayaa saaka sameeyay hawlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka magaalada, ka dib dil xalay ka dhacay.
Amniyaadka Al Shabaab ayaa dilal qorsheysan waxa ay ka fuliyaan Magaalada Baledweyne, oo Ciidamada Dowladda iyo Amisom ay gacanta ku hayaan.